ZCash စျေး - အွန်လိုင်း ZEC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ZCash (ZEC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ZCash (ZEC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ZCash ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $484 470 844.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ZCash တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ZCash များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZCashZEC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$69.49ZCashZEC သို့ ယူရိုEUR€57.29ZCashZEC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£50.83ZCashZEC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.61.75ZCashZEC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr595.71ZCashZEC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.426.22ZCashZEC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1494.9ZCashZEC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł260.09ZCashZEC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$88.59ZCashZEC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$90.19ZCashZEC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1402.95ZCashZEC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$538.7ZCashZEC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$379.94ZCashZEC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5071.06ZCashZEC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.11164ZCashZEC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$92.33ZCashZEC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$96.69ZCashZEC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2084.12ZCashZEC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥450.3ZCashZEC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥7211.2ZCashZEC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩76660.14ZCashZEC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦26511.47ZCashZEC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽5261.7ZCashZEC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1956.26
ZCashZEC သို့ BitcoinBTC0.00174 ZCashZEC သို့ EthereumETH0.0553 ZCashZEC သို့ LitecoinLTC0.401 ZCashZEC သို့ DigitalCashDASH0.687 ZCashZEC သို့ MoneroXMR0.473 ZCashZEC သို့ NxtNXT5625.43 ZCashZEC သို့ Ethereum ClassicETC9.49 ZCashZEC သို့ DogecoinDOGE7022.93
ZCashZEC သို့ BitsharesBTS2407.92 ZCashZEC သို့ DigiByteDGB2143.15 ZCashZEC သို့ RippleXRP206.6 ZCashZEC သို့ BitcoinDarkBTCD229832198.75 ZCashZEC သို့ PeerCoinPPC136 ZCashZEC သို့ CraigsCoinCRAIG3038659888079.92 ZCashZEC သို့ BitstakeXBS40.46 ZCashZEC သို့ PayCoinXPY65132.04 ZCashZEC သို့ ProsperCoinPRC6949270326.62 ZCashZEC သို့ YbCoinYBC0.0198 ZCashZEC သို့ DarkKushDANK2138316217537.87 ZCashZEC သို့ GiveCoinGIVE14433634468380.82 ZCashZEC သို့ KoboCoinKOBO11804.03 ZCashZEC သို့ DarkTokenDT64.01 ZCashZEC သို့ CETUS CoinCETI19244845957840.86